Wararka Maanta: Khamiis, July 5 , 2012-Maktabadda wareegta ee Buugaagta oo safar aqoon korodhsi ah ku maraya degmooyinka Somaliland
Munaasibaddii qaabilaadda buugaagta geeddiga ah oo lagu qabtay Hudheelka Rays ee magaalada Borama waxa ka qayb galay masuuliyiinta Jaamacadda Cammuud oo uu horkacayo guddoomiyaha Jaamacaddaas Prof. Saleebaan Axmed Guuleed, arday tiro badan iyo sidoo kale marti-sharaf kale.
Guddoomiyaha Jaamacada Camuud Prof:Saleebaan Axmed Guuleed oo isaguna ka hadlay qiimaha Maktabadani ay u leedahay dhalinyarada da’dayar.
Sidoo kale, waxa ay Maktabadan wareegaysaa soo martay degmadda Gabiley oo halkaasi ay ku soo dhoweeyeen naadiga Akhriska ee Timacadde iyo ardayda jaamacadda ee gobolkaasi.
Sidoo kale, Maktabadda wareegta ayaa safarkoodii xidhiidhka ahaa ee maalmihii u dambeeyay ku jireen soo gaadhay degmadda Sheekh oo ka tirsan gobolka Saaxil, halkaasna waxa ku soo dhoweeyey Naadiga Akhriska ee Degmada Sheekh.
Safarkan Geeddiga Bugaagta oo safarkan uu wehelinayo wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland Boobe Yuusuf Ducaale, ayaa munaasibad loogu qabtay hoolka xarunta degmada Sheekh, iyadoo maamulka degmadu uu kala qaybgalay munaasibadaas. Waxa lagu soo bandhigay Maktabadda wareegta iyo buugaag qiimo badan oo ay halkaas kula kulmeen ardayda wax ka barata dugsiyada SOS iyo dugsiga Xanaannada Xoolaha ee degmadaas.
Waxa halkaasi hadalo ka soo jeediyey hogaamiyaha maktabadda wareegta Qoraa: Jaamac Muuse Jaamac, Wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland Boobe Yuusuf Ducaale iyo maamulka degmadda Sheekh, kuwaas oo ardayda kula dardaarmay inay wax akhriyaan, buugaagtana ka faa’iidaystaan.